Hindiya: Dagaal siyaasadeed ayaa kadhacay ka dib markii ay laba ka tirsan xubnaha guddiga CM, Congressman, kuxigeen ku xigeen India News - TELES RELAY
ACCUEIL » International India: Argagax siyaasadeed ayaa ku dhuftey kadib markii ay laba xubnood oo ka tirsan guddiga CM, xubin ka tirsan Congress, ku xigeen ku xigeen India News
Hindiya: Dagaal siyaasadeed ayaa kadhacay ka dib markii ay laba ka tirsan xubnaha guddiga CM, Congressman, kuxigeen ku xigeen India News
Indore / Bhopal: A kooxda saraakiisha canshuurta dakhliga Delhi weeraray guryaha iyo xafiisyada ee aides oo ka mid ah Wasiirka-sare oo Madhya Pradesh, Kamal Nath - Praveen Miglani iyo Lisitaanka Kakkar - oo qayb ka ah hawlgal qaran ee 50 meelo kala duwan.
In eegaayo doorashada Lok Sabha, cadaadis ka dhacay ka hor waaberiga oodda duufaan siyaasadeed ee xildhibaanka, xataa sida saraakiisha canshuurta sheegay in baaritaan ayaa lagu sameeyay oo ku saleysan macluumaadka ku saabsan dhaqdhaqaaqyada muhiimka ah ee dhaqaalaha. Ilo in waaxda sheegay in ku saabsan 11 crore ayaa laga helay inta lagu jiro hawlgallada iyo dokumentiyo laga helay inta lagu guda jiro raadinta ee dhismaha ee Delhi MP iyo Goa. waaxda cashuuraha ayaa sii daayay tafaasiisha qabashada inta lagu jiro baadhitaannada.
Kailash Vijayvargiya BJP sameeyey qodid ah Congress oo wuxuu ku yidhi: ". Waxaa hadda cad in tuugo oo keliya inaad ka cabato in chowkidars" Congressman ayaa ku jawaabay, "Tani waa aargoosi siyaasadeed, isku day falayaal by Candhi ayaa si xayiraan image of Congress maalinta doorashada ka hor. Ma guuleysan doonto. Waa calaamad u tahay in Ra'iisul Wasaaraha Narendra Modi ayaa la ruxruxay guusha Congress-ka ee saddex doorasho guud. "
Weerarradu waxay bilaabmeen 3 subaxnimadii markii saraakiisha canshuurta, oo ay la socdeen nabarradii CRPF, ay soo gaadheen cinwaannada baabuurta kirada ah. Guryaha Kakkar ee Indore iyo Bhopal ayaa la baadhay. Sidoo kale waxay ahaayeen guryaha carruurta ee Miglani ee Delhi. Dhibaatooyinka ayaa sidoo kale ka socda meelo badan oo ka mid ah Chhindwara . Booliska gobolka waxba ma laha fikradaha kufsiga. Saraakiisha IT-ga ee maxalliga ah ayaa sheegay in weerarrada ay fuliyeen kooxo ka yimid Delhi ayna iyagu ka qaybgalin wax badan.
Kakkar, oo si ikhtiyaari ah uga fadhiistay waaxda boliiska dhowr sano ka hor, wuxuu ahaa sarkaal Nath oo waajibaad gaar ah leh, waxaana keenay Miglani ka dib markii Nath noqday CM. Miglani ayaa la sheegay in uu yahay ninka Nath ee jimcihii. Miglani iyo Kakkar waxay labaduba iska casileen Febraayo 22, ka hor intaan lagu dhawaaqin natiijooyinka doorashada Lok Sabha.
kooxda IT ayaa garaacay albaabbadii guriga tirada Kakkar 74 xaafadda, Shalimar Township, Indore, iyo laba meelo kale si ay u 3 qaato dadka ugu by yaab. Shaqaalaha CRPF waxay ilaaliyaan inta lagu jiro baaritaanka guriga. Sida laga soo xigtay ilo wareedyo ku sugan waaxda IT ah, baaritaan ayaa sidoo kale ka dhacay macradka ah Vijay Nagar iyo cinwaanada in BCM Heights iyo Jalsa Garden.
Vijayvargiya tweeted: "Lacagta madow ee qiimaha rupees ayaa laga qabtay xoghayaha gaarka ah ee CM Camal Nath intii lagu jiray weerarkii dakhliga."
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के के htt ... https://t.co/xD9V2dlgpV (@KailashOnline) 1554619802000
Afhayeenka warfaafinta ee Pradesh Shoba Oza ayaa sheegay in BJP ay adeegsanayaan hay'adaha dhexe si ay u ololeeyaan kaliya Congress-ka laakiin dhammaan dhinacyada mucaaradka ah ka hor doorashooyinka. "CBI, waaxda IT-ga iyo ED ayaa aragtida kaliya ee musuq-maasuq ka ah hoggaamiyayaasha mucaaradka? Ma arki karaan musuqmaasuqa kooxda 'chorkidars'? Haddii weerarradani aysan ahayn aargoosi siyaasadeed, maxaad u tegi weyday weerarka Amit Shah Jay Shah, Yeddyurappa, Shivraj Singh Chouhan iyo Raman Singh, oo magacyadooda lagu sheegay fadeexadaha musuqmaasuqa? .
Kakkar ayaa madaxweyne ka helay madaxweyne ku-xigeenkii ugu fiicnaa ee shaqadiisa bilayska. 2004, wuxuu ka tagay ciidan wuxuuna ku biiray OSD isaga oo la jooga wasiirkii hore ee midowga iyo kan Kantilal Bhuria. 2018, wuxuu noqday OSD-ga Nath markii uu noqday CM.
Pope Francis iyo Boqorka Morocco ayaa difaacay xaaladda ujeedka 'Jerusalem'
Switzerland: Switzerland waxay ku guuleysatay naxaas